गणितज्ञ २०२१ को लागी उत्तम क्यारियर विकल्प
विदेश विदेश अध्ययन गर्नुहोस्
२०२१ अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय छात्रवृत्ति विदेश अवसर अध्ययन गर्नुहोस् शिक्षा अनुदान र कोष |
निःशुल्क अनलाइन पाठ्यक्रम
क्यानाडा मा अध्ययन | प्रवेश | छात्रवृत्ति | शुल्क | अनुदान र .ण
विज्ञापन र प्रायोजित पोष्टहरू
जुलाई 17, 2021 Okpara फ्रान्सिस
गणितज्ञहरूका लागि उत्तम क्यारियर विकल्पहरू
गणित एक उत्कृष्ट कोर्स हो किनभने यसलाई वित्त, प्रविधि, उड्डयन, विज्ञान, र सञ्चारमा समाहित गर्न सकिन्छ। धेरै बिद्यार्थीहरु सोध्छन् कि तिनीहरु लाई के गर्न सक्छन् गणित डिग्री यसको उत्तर यो छ कि त्यहाँ धेरै विशेषज्ञताहरू छन् जब तपाईं एक गणित डिग्री संग स्नातक।
अर्को पटक तपाईले यस कार्यक्रममा नामांकन गर्न चाहानुहुन्छ, यो जान्नुहोस् कि यो विभिन्न क्षेत्रमा लागू हुन्छ। कार्यक्रम तपाइँको समस्या सुल्झाउने र आलोचनात्मक सोच कौशलहरु लाई बढावा दिनेछ। तपाईं डाटा विश्लेषक, अर्थशास्त्री, वा ईन्जिनियरि in्गमा ज्ञान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले गणित कार्यक्रमबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुने केही कार्यहरूमा सांख्यिकीविद्, वित्तीय विश्लेषक, गणितज्ञ, डाटा वैज्ञानिक, खगोलविद्, कार्यवाहिनी, र कलेज गणित प्राध्यापक हुनु समावेश छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई प्रविष्टि-स्तर रोजगारहरूको लागि तयार गर्दछ, र उनीहरूको प्रमुख छनौट गर्दा तिनीहरू लचिलो हुनेछन्।
आवश्यकताहरू शैक्षिक संस्थाहरू बीच भिन्न छन्, र तपाईंले स्नातक हुन धेरै क्रेडिटहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईले पाठ्यक्रममा भर्ना गरिसकेपछि तपाईंलाई शैक्षिक मद्दत चाहिन्छ भने तपाईले धेरै अनलाइन विज्ञहरू लिन सक्नुहुन्छ।
गणित कार्यक्रम पछि, विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्यारियर अगाडि बढाउन सक्दछन् र उत्कृष्ट भू-स्नातक गणित कार्यक्रमहरूको आधारमा विभिन्न भूमिकाहरू पनि लिन सक्छन्। केहि कामहरू समावेश:
एल्गोरिदम इन्जिनियरको रूपमा सफल हुनको लागि तपाईंले गणित र प्रविधि दुवै बुझ्नु आवश्यक छ। यी पेशेवरहरूले निर्देशनहरू विकास गर्छन् जुन एक कम्प्युटरलाई अपरेट कसरी गर्ने भनेर बताउँछ।
तपाईं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिन्ट पहिचानबाट स्वचालित ड्राइभि applications अनुप्रयोगहरूको लागि एल्गोरिदम डिजाइन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। विशेषज्ञ बन्नको लागि तपाईलाई गणित वा कम्प्यूटर विज्ञानमा मास्टर डिग्रीको आवश्यक पर्दछ। बिभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाहरूको पूर्ण समझले सहयोगी हुनेछ।
भूगर्भविद्हरूले पृथ्वी र अन्य ग्रहहरूबीचको दूरी, पृथ्वी कसरी परिवर्तन हुन्छन्, र पृथ्वीको क्रस्ट आन्दोलन मापन गर्न गणितको प्रयोग गर्छन्। मिलिमिटर भित्र पृथ्वीमा कुनै पनि दुई बिन्दुहरू बीचको दूरी निश्चित रूपमा गणना गर्न तिनीहरू सटीक मापन प्रस्ताव गर्दछन्।
तिनीहरूको काम वैज्ञानिकहरूको लागि लाभदायक छ र ग्रहको आकारमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरूको मूल्यांकन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। गणितमा उन्नत डिग्रीको साथ सुरू गर्नुहोस्; भौतिक विज्ञान, कार्टोग्राफी, वा पृथ्वी र विज्ञान जस्ता अन्य पाठ्यक्रमहरूमा लगानी गर्नुहोस्।
डाटा विश्लेषकहरूको रूपमा, डेटा वैज्ञानिकहरूले जटिल डाटाबाट मूल्यवान अन्तर्दृष्टि निकाल्छन्। डाटा विश्लेषकहरूले अवस्थित उपकरणहरूको साथ डाटा परीक्षण गर्छन्; अर्कोतर्फ, डेटा वैज्ञानिकहरूले नयाँ समस्याहरू र एल्गोरिदम विकास गर्न समस्याहरूको समस्या समाधान गर्न। डाटा वैज्ञानिक एक गणित मेजरहरूको उन्नत मात्रात्मक कौशलताका लागि उत्तम रोजगारीहरू मध्ये एक हो; तपाईलाई गणित र तथ्या ;्कको मास्टरको डिग्री चाहिन्छ; पीएचडीको साथ उम्मेदवारहरू बजारमा छन्।
यी विशेषज्ञहरूले वायुमंडलीय अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न उन्नत मोडलिंग प्रविधिको प्रयोग गर्छन्। तपाईलाई अनुसन्धान पदहरूको लागि स्नातक-स्तर प्रशिक्षण वा गणितमा स्नातकको आवश्यक पर्दछ, थप मौसम विज्ञानमा मास्टरको एक सम्भावित मार्ग हो।
तिनीहरू गणितिय अवधारणाहरू प्रयोग गर्छन् कम्प्युटर सिमुलेशनहरू सिर्जना गर्न जुन प्रक्रियाहरू, परियोजना परिणामहरू, वा भविष्य व्यवहारको भविष्यवाणी गर्दछ।
यी गणितिय मोडेलरहरूले एनिमेसन र भिडियो गेम डिजाइनदेखि एयरोस्पेस इन्जिनियरि or वा जैविक अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्दछन्। यी सबै प्राप्त गर्न तपाईलाई लागू गरिएको गणितमा कम्तिमा मास्टर डिग्री आवश्यक हुन्छ।
मात्रात्मक वित्तीय विश्लेषक
तिनीहरू वित्तीय कम्पनीहरूको लागि परिष्कृत मोडेलहरू विकास गर्छन् जब मूल्य धितो लिईन्छ, जोखिम कम गर्दछ, र नाफा बढाउँछन्। कार्य प्रभावी रूपमा प्रदर्शन गर्न, तपाइँ डेटा बुझ्न को लागी धारणा प्रश्नहरू तयार गर्न आवश्यक छ।
यी स्थितिहरू मध्ये केहीले कम्प्युटर कोडिंग समावेश गर्दछ। वित्त पाठ्यक्रमहरू सहयोगी हुन सक्छन्, त्यसैले यो क्याल्कुलस, रैखिक बीजगणित, तथ्या .्क, र सम्भाव्यता मा स्नातक-स्तर प्रशिक्षण हुन महत्वपूर्ण छ।
गणित majors बाट क्यारियर प्रशस्त उद्योगको विस्तृत श्रृंखलामा उपलब्ध छन्। रहस्य उत्तम गणित कार्यक्रमहरूको खोजीमा हो। इनामदायी र सन्तोषजनक क्यारियरमा तपाईंको पहिलो चरणको लागि तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो योग्यता विकास गर्न एक मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था खोज्नुहोस्। तपाईं आवश्यकताहरूको लागि अनलाइन हेरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् यदि यो तपाईंको प्राथमिकतामा उपयुक्त छ कि छैन।
अघिल्लो पोस्ट:गहन प्रश्नहरू केटीलाई सोध्नुहोस्
अर्को पोस्ट:होस्टिंग माइक्रोसफ्ट एक्सेस डाटाबेस अनलाइन को कुञ्जी फाइदा
फलो-अप ईमेल द्वारा टिप्पणी मलाई सूचना दिनुहोस्।
इमेल द्वारा नयाँ पोस्ट मलाई सूचना दिनुहोस्।
यी भन्दा राम्रो सेवाहरू?
Z निबन्ध - कस्टम निबन्ध लेखन सेवा।
हामी केवल नेटिभसँग काम गर्छौं निबन्ध लेखकहरु सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै भन्दा राम्रो निबंध पाउनुहुन्छ। प्राप्त गर्दै तपाईको कागज सकियो सजिलो छ। कसरी पत्ता लगाउनुहोस्।
हाम्रो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति समूह यहाँ सम्मिलित हुनुहोस्
कुनै पनि चलिरहेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको बारेमा नवीनतम जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र विश्वव्यापी रूपमा छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग च्याट गर्नुहोस्।
हाम्रो सामेल हुनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति टेलीग्राम समूह (छलफल सक्षम)
हाम्रोमा शामिल हुनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति WhatsApp समूह २ (छलफल सक्षम छैन)
ट्विटर मा हामीलाई पालन अवसरहरू र विदेशमा छात्रवृत्तिमा हाम्रो भर्खरको ट्वीटहरू हेर्न।